Wararka Maanta: Isniin, Sept 17, 2012-Ciidamada Dowladda Soomnaaliya iyo kuwa dalka Kenya oo la Wareegay Deegaanka Birta Dheer iyo Kismaayo oo Haawaneysa
Afhayeenka ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya Max'ed Faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen deegaanka Birta dheer, isagoona xusay in Al-shabaab ay u geysteen khasaarooyin lixaad islamarkaasina ay ka talaabeen difaacoodii ugu xooganaa ee Jubooyinka.
Saraakiisha dowladda ee Jubooyinka ayaa sheegay in dagaalkii shalay ay khasaaro xooggan ugu geysteen Al-shabaab, waxayna sheegeen in dhankooda ay uga dhinteen afar qof.
Ilaa imika ma jiraan masuuliyiin katirsan Al-shabaab oo ka hadlay dagaalkii shalay mana jiraan warar madax bannaan oo qeexaya khasaaraha rasmiga ah ee kala gaaray dhinacyadii shalay ku dagaalamay deegaanka Birta Dheer ee Gobolka Jubada Hoose.
Dhinaca kale, wararka aynu ka heleyno magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xoogagga Al-shabaab ay gabi ahaanba isaga huleeleen magaaladaasi, iyadoona lagu soo waramayaa in ay fasaxeen maxaabiistee ku xirnayd xabsiga dhexe ee degmadaasi.
"Ciidamadii magaalada joogay waa ka baxeen, saaka ayaa kuwii ugu danbeeyay ay baxeen, magaaladu waa cidlo," sidaa waxa yiri mid kamid ah dadka ku dhaqan Kismaayo oo HOL u waramay isagoo codsaday in magaciisa aan la xigan.
Warar is khilaafsan ayaa kasoo baxaya halka ay qabteen xoogaggii Al-shabaab ee ku sugnaa Kismaayo, warar qaar ayaa sheegaya in ay aadeen dhanka goobaha la isku horfadhiyo, halka warar kalena ay sheegayaan in ay qabteen dhanka Degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe.
Xaaladda gobollka Jubada hoose ayaa maanta ah mid kacsan, waxaana ay cabsi lasoo darastay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran, waxaana laga cabsi qabaa in markale ay dagaallo ka qarxaan deegaanada ku yaal duleedka Kismaayo oo ay weli isku horfadhiyaan dhinacayada isaga soo horjeeda Jubooyinka.